Fahasalamana: bingeing entin'ny dopamine | Reward Foundation
Home fahasalamana Balance & Imbalance
Ny vatana dia mitady fifandanjana hitazonana ny haavon'ny angovo sy hitazonana ny rafitra rehetra hiasa. Ao anatin'ny rafitra iray no iantsoana an'ity dingana ity homeostasis. Ohatra, ny olon-dehibe dia mila torimaso 6-8 ora alina ary ny tanora kosa mila bebe kokoa. Mila torimaso izy ireo hanampiana ny ati-doha sy ny vatana hamerina amin'ny laoniny ny tenany, hanao izay fanamboarana, hanamafisana ny fahatsiarovana ary hanasitrana. Ny vatana dia mitazona ny haavon'ny siramamy amin'ny rà, ny tosidra ary ny rano amin'ny haavon'ny tsy tapaka ao anatin'ny faritra tery. Rehefa rafi-pifandraisana maro no mifampiresaka sy mifehy eo amin'izy samy izy mba hitazomana ny fandanjalanjana sy hifanaraka arakaraka ny fiovan'ny toe-javatra dia antsoina ilay dingana allostasis. Izy io dia rafitra mavitrika kokoa amin'ny fandanjana, mifehy rafitra maro indray mandeha.
Ny fitsipiky ny Goldilock
Inona no mitranga amin'ny dopamine be loatra, kely loatra na marina.
Afaka mankafy ny 'valisoa' amin'ny sakafo na firaisana isika. Rehefa manana ny ampy hihaonana amin'ny filantsika ara-batana isika, ny atidohantsika dia mandefa famantarana fahafaham-po milaza amintsika mba hijanona. Avy eo isika dia afaka miroso amin'ireo hetsika hafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsy miraharaha ireo fambara isika ary mandeha hatrany, dia azontsika atsipy amin'ny fandanjana ny vatana. Ohatra, rehefa manohy 'misakafo' amin'ny zavatra na fitondran-tena isika, dia azo hajanona vonjimaika ny rafi-pitondrana. Rava ny fahafaham-po. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny atidohantsika dia afaka manomboka mandika ny fisotroan-dronono ho toy ny filàna 'velona'. Afaka mamela antsika hanohy hanintona tena vetivety isika. Alao an-tsaina ny bera alohan'ny hatory ho an'ny ririnina rehefa afaka mitelina salmon 20 indray mandeha nefa tsy marary. Na hevero ny vanim-potoanan'ny fanambadiana amin'ny lohataona izay hikatsahan'ny biby zezika vady betsaka araka izay tratra.
Tsy tapitra ny vanim-potoana fanaovana mariazy
Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia miseho amin'ny atidoha toy ny vanim-potoana fampakaram-bady, fa vanim-potoana fampakaram-bady tsy mifarana. Tadidio fa ny atidohantsika taloha dia nivoatra tamin'ny fotoana tsy fahampiana. Ny atidoha voalohany dia mahita ny pôrnôn'ny Internet ho toy ny 'frenzy fihinana'. Fotoana lehibe ahazoana zezika maimaimpoana, izay manosika antsika 'hahazo izany raha tsara ny fahazoana'. Miaraka amin'ny filofosana tsy tapaka, ny ati-doha dia mandika ny bonanza mbola tsy nisy hatrizay ho filana velona. Vetivety dia hitady izay hampifanarahana izy amin'ny alàlan'ny famonoana ny mekanisma mahavoky ny ati-doha.
Ny orinasan-tserasera dia mampiasa ny fikarohana siantifika tsara indrindra misy mba hahatonga ny fahazarana mamorona vokatra hitazomana antsika. Jereo ity TED talk avy amin'i Nir Eyal.
Ny sainay dia ny maodelim-pandraharahana amin'ny Internet hoy i Sir Tim Berners Lee, rain'ny tranonkala manerantany. Ny sandany amin'ny mpanao dokam-barotra dia toy ny volamena. Tsy misy izany lalao na video maimaimpoana izany amin'ny Internet. Isaky ny manindry 'tahaka' antsika amin'ny media sosialy izahay na mijery horonantsary vaovao, orinasa an-jatony no manangona izany angona izany ary manangana mombamomba anay. Arakaraky ny fiankinan-doha amin'ny Internet no mampitombo ny vola azon'ireo mpanao dokambarotra amintsika. Ny fiankinan-doha dia midika hoe tsy dia misy saintsika loatra sy hery ananan'ny ati-doha hianarantsika ny fahaiza-manao, hahazoam-bola na hananganana asa.
Vokatry ny saina >>